ASELSAN iyo KOUSTECH waxay soo saareen Kaararka Qaybinta Awoodda ee UAVs | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraASELSAN iyo KOUSTECH waxay soosameen Kaararka Qaybinta Awoodda ee UAVs
08 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, cimilada, ISDIFAACA, TURKEY, VIDEOS
Aselsan iyo koustech waxay soo saareen gudi koronto qeybinta xaraashka ah
KOUSTECH waxay soo saartay "Nidaamka Qaybinta Awoodda" iyada oo la kaashanayo injineerada ASELSAN in loo isticmaalo gawaarida hawada iskiis u maareyn ee madaxbanaan.
KOUSTECH, kooxda Kocaeli Technologiyada Teknolojiyada madaxbannaan ee Jaamacadda, waxay soosaaraneysey Nidaamyada Hawada Sare ee Madaxa-bannaan muddo 22 sano ah oo ay wehelinayaan 2 arday oo injineerinka ah. Kooxda KOUSTECH, oo fulisa dhammaan qaabeynta, soosaarka, imtixaanka iyo habraacyada u qalmidda leh awoodooda iyo awoodooda, ayaa sidoo kale dalkeena u matalaya tartanka AUVSI-SUAS ee lagu qabtay Mareykanka.
Kooxda, waxay soo saartay 4 diyaaradood oo iskeed u taagan oo madax bannaan, laba duullimaad oo kala jaad ah oo madaxbannaan iyo baabuur dhuleed oo iskood isu-haysta illaa iyo hadda, waxay horumarineysaa labada qalab iyo nidaam-hoosaad. In kasta oo la horumarinayo nidaamyada elektiroonigga ah ee aagagga ay ka midka yihiin nidaamka xakameynta gimbal, nidaamka qaybinta awoodda, nidaamka dareemayaasha firfircoonaanta, nidaamka raad-raacyada anteeno, waxay horumarisaa tikniyoolajiyadda wax soo saarka ee meelaha ay ka mid yihiin sameynta sawirrada, duulista iskeed u dhisan, raadinta waddo madax-bannaan, iyo soosaaridda caaryada wax-soo-saarka iyo caaryada wax-soo-saarka.
ASELSAN - Wadashaqayn KOUSTECH
KOUSTECH waxay soo saartay "Nidaamka Qaybinta Awoodda" iyada oo la kaashanayo injineerada ASELSAN loo isticmaali doono diyaaradaha iskood u horumaray. Nidaamka qaybinta awooda koboca waa nidaam loo adeegsan karo nidaamyo badan oo kala duwan, gaar ahaan diyaarado iskii isku maamula.
Iyada oo la adeegsanayo taageerada farsamada ee Gaadiidka ASELSAN, injineernimada Tamarta iyo Tamarta (UGES), Nidaamka Qeybinta Awoodda ee ay soo saartey kooxda Koustech Avionics Systems team waxay buuxineysaa baahiyaha awooda ee nidaamyada elektiroonigga ee kala duwan ee gawaarida iskiis u taagan.
Nidaamka qaybinta awoodda ayaa la soo saaray iyadoo loo eegayo MIL-STD-461 iyo heerarka IPC waxay ka kooban yihiin 3 qaybood oo kala duwan. Mid ka mid ah qaybahaan wuxuu hubiyaa in kuleylka ay u baahan yihiin walxaha elektiroonigga ah ee gawaarida iskiis u saaran lagu kala qaado hab go'doon ah. Qaybta kale, shaandhada elektaroonigga ah, waxay ka hortagtaa faragelinta elektaroonigga, taas oo ah dhibaatooyinka ugu weyn ee baabuurta iskood u taagan. Ka hortagga faragelinta elektaroonigga ah qaab dhismeedkeeda, waxay awood u siineysaa nidaamka inuu ka madax banaanaado waxyeelada khalkhalka. Go'doomin iyo qaab dhismeedka nidaamka waxaa lagu bixin karaa isku xirayaasha milatariga lakabka saddexaad, lakabka isku xirka.
Waxsoosaarkan waxaa soo saaray koox jaamacadeed ah iyadoo la kaashanayo shirkadda Aselsan, oo shirkado badan oo dalkeenna ka mid ah ay ku adkaatay inay horumar ku sameeyaan heerarkan. Technology National guuro ardayga kasbadeen shaqaalaha lahaanshaha awoodda dalka ee xawaaladaha mustaqbalka la filayaa in ay qayb muhiim ah oo Breakthrough Technology National Turkey ee la endüstrü ay ku helaan noqon.
Xubnaha kooxda KOUSTECH ee qalin jabiya oo firfircoon sida hagida shaqaalaha waxay doorar muhiim ah ka qaataan waaxaha madaniga iyo difaaca. Khibradda ay ka heleen KOUSTECH, waxaa jira xubno badan oo kooxda ah kuwaas oo ka soo shaqeeyey hoggaanka sare ee tikniyoolajiyada iyo hay'adaha maaliyadeed ee waddankeenna sida BAYKAR Makine, Duulista Hawada Turkiga iyo Warshadaha Hawada, TEI, STM, NETAŞ iyo Vakıfbank. Marka tan la eego, KOUSTECH waxay u shaqeysaa sida "warshad" oo soo saarta quwad injineernimo oo tababbaran gaar ahaan warshadaha Difaaca Turkiga.
Kabtanka kooxda KOUSTECH Kadir Doğan wuxuu sheegay in hadafkooda ugu weyni yahay "soo saarista tikniyoolajiyadda" wuxuuna hoosta ka xariiqay inay sii wadaan shaqadooda inkasta oo ay dhibaatooyin la kulmaan.
Do'an wuxuu yidhi, "Waxaan qabnaa shaqo anshax leh. Waxaan nahay koox had iyo jeer hesha khibrad una gudbiya khibradooda. Waxaan isku dayeynaa inaan u dhaqanno qaab dhismeedka hay'ad ahaan. Hadafkayaga ugu weyn waa in aan sare u qaadno shakhsiyaadka soo saara tikniyoolajiyadda dalkeenna oo aan sidan u samayno, si aan waddankeenna ugu gaarsiino tiknoolajiyad ku aaddan nidaamyo is-xukun. Waxaan ku arki karnaa saameynta ay ku yeelatay tikniyoolajiyadani meelo badan oo kala duwan. Tusaale ahaan, mid ka mid ah xubnaheena kooxda ee ka soo shaqeeyay kooxdeena isla markaana qalin jabiyay ayaa sidoo kale ka shaqeeya mashruuca Breathing Apparatus ee waddankeenu soo saaro gudaha.
Gaar ahaan shirkadda difaaca muhiim ASELSAN iyo taageero hay'adaha our, sida Turkey iyo Kooxda Technology Foundation BAYKAR our sida aan ka dhigi kara shaqadan. Sababtoo ah aad bay u adag tahay inaan taageero u helno shaqada aan qabanno oo aan ka baxsanayn dhowr shirkadood iyo machadyo. Way ku adag tahay shirkado badan inay sharixi karaan shaqadooda iyo muhiimadooda. Sidaa darteed, ASELSAN, Turkey BAYKAR iyo technology si ay u taageeraan kooxda sida hay'adaha iyo ururada aan qaadatid xaalad aad u muhiim ah.
Waxa jira dad badan oo dhalinyaro ah oo annaga oo kale ah kuwaas oo doonaya in ay horumariyaan tikniyoolajiyadda dalkeenna. Sanadihii la soo dhaafay, dhalinyaro badan ayaa ka shaqeynayay dibedda waxayna halkaas ka qabteen shaqo fiican. Sababta ugu weyn ee dhallinta annaga oo kale ah aan shaqadan ugu qabanno dibedda waxay tahay inay maqleen codkooda oo ku filan oo ay heli waayaan taageero. Waxaan la kulannaa xaaladdan inbadan. Waxaan rajeynayaa in guulaha kooxaha sida anaga oo kale ah arintaan ay abuuri doonaan wacyigelin iyo taageero kaliya dadka iyo xarumaha qaarkood laakiin sidoo kale qaab ballaaran ayaa looga soo horjeedaa shaqada kooxahaas. Sidan, waddankeenna iyo qarankeennuba waxay u noqon doonaan kuwa ku guuleysta ruuxa Mobbalada Farsamada Qaranka. ” ayuu yiri. (Isha: defenceturk)
Metrobus Card si aad u hesho safar dhaqaale oo dheeraad ah Ankara
UGU DANBIILAHA UGU DAMBAHA EE SOO SAARKA JOOJINTA EE QALBIGII FASALKA TCDD
Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo Soo Saaraysa Qoryaha Hubka Turkiga Laga bilaabo 2021
Tülomsaş 14 Waxay soo saartaa 431 Locomotive Sanadkiiba
Ganacsatada Turkiga waxay soo saaraan taraafikada maxalliga ah iyo qaranka
Shirkad ku taal Ankara waxay soo saartey gawaarida tareenka ee maraakiibta iyo tareenada
Yılmaz Reductor wuxuu soo saarey gawaarida koowaad ee gawaarida xaafadda
Dhaqdhaqaaqa Teknolojiyadda Qaranka
Nidaamyada Hawada Madaxbannaan
Neefsashada Aaladda Qalabka
Technology Turkey Kooxda Foundation
Maaskaro waxaa lagu qaybinayaa Izmir in ka badan 65 sano, markaa halkee ayaan ka iibsan karnaa?
Codsiga ku-xigeen ee Gawaarida Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay ee Şanlıurfa ayaa la Hoos-gareeyay
Ardayda Jaamacadda waxay soo saartaa Skateboard
Yilmar Reductor wuxuu soo saaraa Baabuurta Gaadiidka ee ugu Horreeya iyo Gaadiga Gear ee Turkiga
KARDEMİR Waxay Soo saartaa Birta Tayada Sare leh ee Warshadaha Gawaarida iyo Difaaca
TÜLOMSAŞ Soo saarka Wareega Guriga iyo Qaranka
Turkey ayaa Kardemir ayaa soo saaray gariiradda qaro